ट्रु कलर एपबाट हैरान हुनुहुन्छ ? यसरी हटाउनुस् आफ्नो नाम र नम्बर ! | News Polar
काठमाडौं । ट्रु कलर एप नयाँ नम्बरबाट फोन आउँदा नाम देखाउने एप हो । अहिले स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताले यो एप अवश्य राखेकै हुन्छन् । यसमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो विवरण राखेमा सबै विवरण अर्को प्रयोगकर्ताले हेर्न पनि सक्छन् ।
पछिल्लो समय केही देशले यो एपलाई असुरक्षित एप भन्दै प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरेका छन् । तर पनि फोन आउँदा नामको विषयमा जानकारी लिन डाउनलोड गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन । कसैलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ हाम्रो विवरण कसरी सेव र सेयर गर्छ भनेर । कसैले फोटो पनि राखेका हुन्छन् । त्यो पनि फोन गर्दा कसैको नम्बरमा जान्छ ।
हटाउन यसो गर्नुहोस् :
अब एपको दायाँतर्फ माथि भएको मेनु बटन ९तीन वटा थोप्ला भएको० मा ट्याप गर्नुहोस् । त्यसपछि सेटिङमा जानुहोस् । त्यहाँ तपाईंले प्राइभेसी सेन्टर चयन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अन्तिममा रहेको डिएक्टिभ बटन चयन गरी कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशित : आश्विन १२, २०७८, १६:२७:१४